Ungabelana njani nge-GIFS kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungabelana njani nge-GIFS kwi-Twitter?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 324
Ii-GIFs ku-Twitter ziluhlobo lomxholo wemultimedia onokwabelana ngawo nanini na. Ngokusebenzisa imixholo yemultimedia uya kuba nakho ukubonelela ngesixa esikhulu solwazi kunabalinganiswa abasekwe yi-Twitter yeeTweets.
I-GIFS luhlobo lwefomathi olubandakanya inani eliqingqiweyo lemifanekiso edlalwa ngokulandelelana kwilogo engapheliyo. Ezi zisetyenziselwa iinjongo zokuzonwabisa. Kwiwebhu unokufumana izigidi ze-GIFS ezahlukeneyo, ukusuka kwiikhathuni ukuya kwimiboniso bhanyabhanya.
Ezi ntlobo zemifanekiso zithandwa kakhulu kwi-Intanethi, kuba azilulo uhlobo lwevidiyo kuphela, zikwanobunzima obuncitshisiweyo, ukuze ukwazi wabelane ngazo ngokukhawuleza.
Ukuba upapasha i-GIFS kwiqonga lewebhu, Ubunzima babo abunakugqitha kwi-15 yeemgabyte, ngelixa i-App inguqulelo ye-twitter, i-GIFS isenokungagqithi kwii-megabytes ezintlanu ngokobunzima.
Yabelana ngee-GIFs zakho
Ukuqala ukwabelana nge-GIFS kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Yiya kwiiTweets zokubhala i icon, ebekwe emazantsi kwi-akhawunti yakho. Uya kuyifumana le icon kwi-App, ngelixa kuguqulelo lwewebhu, amagama abhalwe kwiiTweets abekwe phezulu kumda wexesha weakhawunti yakho.
Cinezela kwi icon "Iifoto neevidiyo" oya kuyifumana ezantsi kwebhokisi.
Xa ucinezela i icon, iwindow yokukhangela iya kubonakala. Khangela i-GIFS ofuna ukwabelana ngayo.
Nje ukuba i-GIF ilayishwe, iya kubonakala embindini webhokisi yokubhala iTwitter. Uza kubona i-X kwikona ephezulu ngasekhohlo ukususa i-GIF.
Ezantsi ngasekhohlo uza kubona i "tag yabantu" icon. Nantsi iwindow iya kuboniswa ukuba ukhangele igama lomntu ofuna ukumaka. Emva kokuba ukhethe kubo, uya ukugqibezela inkqubo ngokucinezela i "ukulungele" icon.
Unokongeza inkcazo ye-GIFS. Emazantsi e-GIFS uyakufumana i icon "yokongeza inkcazo". Ukucofa kuyo kuya kubonisa itab eya kukuvumela ukuba ubhale inkcazo. Kule nkcazo uya kuba nakho ukubhala oonobumba abali-1000. Xa ugqibile, cinezela i "kwenziwe" icon ukugqiba.
Nje ukuba i-GIFS ikulungele ukupapasha, hit icon "publish". I-tweet ene-GIFS iya kufakwa kumda wexesha weakhawunti yakho.
Uyibona njani i-GIFS ipapashiwe?
I-GIFS inokufumaneka kwiiTweets ezithunyelwe kumgca wexesha. Xa uskrolela kuyo kwaye uza kufumana iTwitter ene-GIFS efakiweyo, iya kudlala ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokuba uyitshintsha kuseto lweakhawunti yakho.
Unokuzikhuphelela ezi GIFs ngokukhupha i-URL ye-tweet apho ikhoyo i-GIF. Ngale dilesi, ungasebenzisa abaphathi bokukhuphela kwi-intanethi okanye usetyenziso lokukhuphela umxholo, ukugcina kwimemori yezixhobo.
1 Iimfuno ze-GIFS
2 Yabelana ngee-GIFs zakho
3 Uyibona njani i-GIFS ipapashiwe?
Ndifuna ukubeka i-emojis kwiakhawunti yam yeTwitch.
Uyisebenzisa kanjani ingxelo ekhanyayo ye-Instagram?